Igwe ekwentị kacha mma iji mee ka akwarium gị dị ọcha | Nke azụ
Njirimara nke akwarium
Natalia Cerezo | 17/08/2021 11:56 | Ngwa
Siphon akwarium bụ ihe ọzọ dị mkpa iji nwee ike rụọ ọrụ nlekọta akwarium anyị ma si otu a debe ya ọcha na azụ anyị nwere ọ happyụ na ahụike. Site na siphoner anyị ga -ewepụ unyi nke gbakọbara na ala ma anyị ga -eji ya mee ka mmiri dị na akwarium dị ọhụrụ.
N'isiokwu a anyị ga -ekwu maka ihe Kedu ihe bụ siphoner, nke ụdị dị iche iche anyị nwere ike ịchọta, ka esi asụpe akwarium anyị ga -akụzịkwara gị ka esi arụ siphon nke aka gị. Na mgbakwunye, anyị na -akwadokwa ka ị gụọ akụkọ ndị ọzọ gbasara kedu mmiri ị ga-eji na aquariums ma ọ bụrụ na ọ bụ oge izizi ị na -ese.
1 Kedu ihe bụ siphon akwarium
2 Kedu ihe kpatara eji akwadebe akwarium?
3 Ụdị siphoner maka akwarium
3.3 Naanị nuo unyi
4 Otu esi eji siphon na akwarium
5 Otu esi esi mmiri akwarium a kụrụ
6 Ebe ị ga -azụta siphon akwarium
Kedu ihe bụ siphon akwarium
Ndị na -ehicha ọdọ mmiri BPS® ...
NICREW 3 n'ime 1 Cleaner Vacuum ...
Tetra GC 40 Cleaner maka ...
Igwe mmiri akwarium, nke a makwaara dị ka siphon, bụ ngwa bara ezigbo uru nke na -enye anyị ohere ịhapụ ala akwarium anyị dị ka ụgbọ mmiri ọla edo, ebe ọ bụ na na -amịkọrọ unyi nke gbakọbara na gravel dị na ala.
Agbanyeghị na enwere ụdị siphoners dị iche iche (dịka anyị ga -atụle na ngalaba na -esote), n'ozuzu ha niile na -arụ otu ọrụ, ebe ọ bụ na ha dị ka ụdị ihe nhicha ihe na -elo mmiri, tinyere unyi a kwakọbara, ka a hapụ ya n'ime akpa dị iche. Dabere n'ụdị ahụ, a na -eji ike eletrik ma ọ bụ aka eme ya, dịka ọmụmaatụ, ekele maka ngwaọrụ mmịpụta nke na -enye ohere ka mmiri ruru unyi daba n'ime akpa dị iche na site na siphon ekele maka ike ndọda.
Kedu ihe kpatara eji akwadebe akwarium?
Ọ dị mma, ebumnuche ịkpụpu akwarium abụghị ihe ọzọ hichaa ya, wepụ ihe fọdụrụ na nri na nsị azụ na -agbakọta na ala nke akwarium. Agbanyeghị, ịlaghachi azụ, siphon na -enyekwa anyị ohere:
Jiri uru gbanwee akwarium mmiri (were nke dị ọcha dochie nke ruru unyi)
Zere mmiri ndụ ndụ (n'ihi algae nwere ike mụọ site na unyi, nke siphon bụ maka iwepụ)
Gbochie azụ gị ịrịa ọrịa n'ihi inwe mmiri ruru unyi
Ụdị siphoner maka akwarium
Enwere ụdị siphoner abụọ maka akwarium, eletriki na akwụkwọ ntuziaka, n'agbanyeghị na n'ime ndị a enwere ụfọdụ nwere njiri mara mma, nke enwere ike ime ka ọ dịrị gị mkpa.
Obere siphon ha dị mma maka obere akwarium. Ọ bụ ezie na enwere ọkụ eletrik, na -adị obere, ha na -adịkarị mfe ma nwee naanị ụdị mgbịrịgba ma ọ bụ ọkpọkọ siri ike, nke mmiri ruru unyi na -esi na ya abanye, tube dị nro na bọtịnụ azụ ma ọ bụ bọtịnụ nke anyị ga -pịa ka anyị nwee ike ị theụ Mmiri.
Obi abụọ adịghị ya na nke kacha arụ ọrụ, nwere otu ọrụ ahụ ka obere igwe okwu (ọnụ siri ike nke mmiri si na ya bata, tube dị nro nke ọ na -agagharị na bọtịnụ ịckụ, yana obere moto, n'ezie), mana enwere ọdịiche na ha dị ike karịa. Ụfọdụ na-adịdị ka egbe ma ọ bụ tinye akpa akpa iji chekwaa unyi. Ihe dị mma gbasara siphon ndị a bụ na, n'agbanyeghị na ha dị ọnụ ala karịa nke akwụkwọ ntuziaka, ha na -enye anyị ohere iru ebe dịpụrụ adịpụ nke akwarium n'enweghị nsogbu.
N'ikpeazụ, n'ime siphon eletriki ị ga -ahụ ha ọkụ eletrik zuru oke (ya bụ, a na -etinye ha n'ime ọkụ ugbu a) ma ọ bụ batrị.
Naanị nuo unyi
bdee 6 na 1 Onye na -ehicha ihe ...
Ụdị siphon akwarium ọzọ anyị nwere ike ịhụ n'ụlọ ahịa bụ nke ahụ na -a dirtụ unyi mana ọ bụghị mmiri. Ngwaọrụ ya na ndị nke ọzọ, yana ihe dị iche na ọ nwere ihe nzacha nke unyi na -agafe ịchekwa ya na akpa ma ọ bụ tank, mana mmiri, nke dịlarị obere nhicha, abanyeghachiri n'ime akwarium. Agbanyeghị, nke a abụghị ihe atụ akwadoro n'ikpeazụ, ebe ọ bụ na amara nke siphon bụ na ọ na -enye anyị ohere iji otu nkume gbuo nnụnụ abụọ, hichaa ala akwarium ma gbanwee mmiri ahụ n'ụzọ dị mfe.
Enwere ọtụtụ ohere ịme siphon nke aka gị, mana lee, anyị ga -egosi gị dị ọnụ ala ma dị mfe. Ị ga -achọ naanị otu ọkpọkọ na karama rọba!
Nke mbụ, nweta ihe ndị mejupụtara siphon: otu mpempe tube, ọ bụghị oke ma ọ bụ sie ike. Ị nwere ike nweta ya na ụlọ ahịa pụrụ iche, dị ka ụlọ ahịa ngwaike ọ bụla. Ị ga -achọkwa a obere karama mmiri ma ọ bụ soda (ihe dị ka 250 ml dị mma).
Bee ihe tube iji tụọ. Ọ gaghị adị ogologo ma ọ bụ dị mkpụmkpụ. Iji tụọ ya, anyị na -akwado ịtụba bọket (nke bụ ebe mmiri ruru unyi ga -aga) n'obere ala nke akwarium. Mgbe ahụ tinye tube n'ime akwarium: oke zuru oke bụ na ị nwere ike tinye ya na ala nke akwarium wee wepu ya ka ọ rute na bọket ahụ n'enweghị nsogbu.
Bee karama. Dabere nha nke akwarium, ị nwere ike bee ya elu ma ọ bụ dị ala (dịka ọmụmaatụ, na etiti ma ọ bụrụ nnukwu akwarium, ma ọ bụ n'okpuru akara ma ọ bụrụ na ọ bụ obere akwarium).
Nweta karama karama wee maa ya ka ị nwee ike tinye ọkpọkọ plastik n'ime mana ka jide ya. Ọ bụ usoro kachasị mgbagwoju anya ịme, ebe ọ bụ na plastik nke okpu ahụ siri ike karịa nke ọzọ, ọ na -efukwa ka akụpuo ya, yabụ kpachara anya ka ị ghara imerụ onwe gị ahụ.
Tinye tube ahụ n'ime oghere dị na okpu ma jiri ya kegide karama. Ọ dịla njikere!
Ka ọ rụọ ọrụ, debe akụkụ nke karama siphon na ala nke akwarium. Wepu afụ niile. Jikere ịwụ na mmiri ruru unyi ga -aga. Na -esote, nuo ngwụcha ọkpọ ahụ n'efu ruo mgbe ike ndọda na -eme ka mmiri daba na bọket (kpachara anya ilo mmiri ruru unyi, ọ nweghị ahụike ma ọlị, yana adịghịkwa mma).
N'ikpeazụ, jiri siphon ị na -eji, kpachara anya ka ị ghara iwepu ihe karịrị 30% mmiri n'ime akwarium mgbe ị na -asacha ya, dị ka azụ gị nwere ike ịrịa ọrịa.
Otu esi eji siphon na akwarium
Ojiji nke siphon, n'eziokwu, dị mfe, mana anyị ga -akpachara anya ka anyị ghara iburu anyị ebe obibi azụ anyị.
Mbụ, kwadebe ngwaọrụ ị ga -achọ: siphoner ahụ na, ọ bụrụ na ọ bụ ihe nlereanya chọrọ ya, a ịwụ ma ọ bụ nnukwu efere. Ekwesịrị idobe nke a n'obere ala karịa akwarium maka ike ndọda ka ọ rụọ ọrụ ya.
Bido jiri nlezianya kpoo oghere nke ọma. Ọ kacha mma ịmalite ebe oke unyi gbakọbara. Ọzọkwa, ị ga -agba mbọ ka ị ghara ibuli gravel ahụ n'ala ma ọ bụ gwupụta ihe ọ bụla, ma ọ bụ nwee ike imetụta ebe azụ gị dị.
Ọ dịkwa mkpa na, dịka anyị kwuru, ewerela mmiri karịa ụgwọ. Oke karịa 30%, ebe ọ bụ na pasent dị elu nwere ike imetụta azụ gị. Ozugbo ịmechara ịgba, ị ga -eji nke dị ọcha dochie mmiri ruru unyi, mana cheta na a ga -emeso nke a ka nke fọdụrụ na akwarium ma nwee otu okpomọkụ.
N'ikpeazụ, n'agbanyeghị na ọ ga -adabere nke ukwuu na akwarium gị, a ga -emerịrị usoro ịgbatị oge site n'oge ruo n'oge. Dịkarịa ala otu ugboro n'ọnwa, yana ihe ruru otu ugboro n'izu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Otu esi esi mmiri akwarium a kụrụ
Akwarium ndị a kụrụ kwesịrị ka enwee akụkụ dị iche iche n'iji siphon akwarium, kemgbe ha siri ezigbo ike. Ka ị ghara iburu ebe obibi azụ gị ụzọ, anyị na -akwado ihe ndị a:
Họrọ a eletrik siphoner, mana enweghị obere ike, ma nwee ọnụ ụzọ pere mpe. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịkpa oke ike wee gwuo ahịhịa, nke anyị chọrọ izere ma ọlị.
Mgbe ịmalite ịmị ara, kpachara anya nke ọma tuphaa mgbọrọgwụ ma ọ bụ mebie osisi. Ọ bụrụ na ị nwere siphon nwere obere mbata, dị ka anyị kwuru, ị ga -enwe ike ijikwa ọkwa a nke ọma.
Lekwasị anya karịsịa na ebe mkpofu na -agbakọba na azụ azụ.
N'ikpeazụ, osisi ndị kacha sie ike iji siphon bụ ndị kwụ n'ahịrị. Mee ya nke ukwuu, were nwayọ ka ị ghara igwu ha.
Ebe ị ga -azụta siphon akwarium
Enwere ọtụtụ ebe ị nwere ike ịzụta siphonerEe, ha na -abụkarị ndị ọkachamara (atụla anya ịhụ ha na ụlọ ahịa nri obodo gị). Kacha nkịtị bụ:
Amazon, eze ụlọ nkwakọba ihe, nwere ụdịdị niile adịlarị ma nwekwa. Ma ha dị mfe, akwụkwọ ntuziaka, ọkụ eletrik, batrị na-arụ ọrụ, karịa ma ọ bụ obere ike… A na-atụ aro nke ukwuu na, na mgbakwunye na nkọwa ngwaahịa, ị ga-eleba anya n'ihe ị ga-ahụ ka ọ ga-esi kwekọọ na mkpa gị dabere ahụmahụ ndị ọzọ.
En ụlọ ahịa anụ ụlọ ọpụrụicheDị ka Kiwoko, ị ga -ahụkwa ụdị ole na ole. Agbanyeghị na ha nwere ike ọ gaghị enwe ụdị dị iche iche dị ka Amazon ma dị ọnụ ala karịa na ụfọdụ, ihe dị mma gbasara ụlọ ahịa ndị a bụ na ị nwere ike gaa n'onwe gị jụọ ọkachamara maka ndụmọdụ, ihe akwadoro nke ọma mgbe ị ka malitere. ụwa na -atọ ụtọ nke azụ.
Igwe mmiri aquarium siphon bụ ngwa dị mkpa iji hichaa akwarium ma mee ka azụ gị, tụgharịa, nwee ahụike na obi ụtọ. Anyị nwere olile anya na anyị enyerela gị aka ịghọta ka o si arụ ọrụ ma mee ka ihe dịrị gị mfe ịhọrọ siphon nke dabara gị na akwarium gị mma. Gwa anyị, ị jirila ngwa a? Kedu ka o siri gaa? Ị na -akwado otu ụdị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Ngwa » Njirimara nke akwarium
Ihe mkpuchi mmiri nke akwarium
Igwe temometa akwarium